डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन लम्बिदै जाँदा अस्पतालहरु प्रदर्शनीस्थल बन्दै « News24 : Premium News Channel
डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन लम्बिदै जाँदा अस्पतालहरु प्रदर्शनीस्थल बन्दै
प्रकाशित मिति : Jul 11, 2018
काठमाडौं । डा गोबिन्द केसीको अनसन लम्बिंदै जाँदा यसअघि जस्तै अस्पतालहरुमा सेवा पनि प्रभावित हुन् थालेको छ । नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित बनेपछि अस्पतालहरु पुनः प्रदर्शनीस्थल बनेका छन् ।
१२ दिनदेखि अनसनमा डा गोविन्द केसीको समर्थनमा बुधवार १० बजेदेखि ११ बजेसम्म काम छाडेर चिकित्सकहरु धर्नामा बसेका छन् । चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिंदा सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामीहरु भने मर्कामा परेका छन् । डा केसीको हरेक पटकको अनसनमा जस्तै अनसन लम्बिंदै जाँदा देशभरका चिकित्सकहरुले काम छाडेर आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिंदै आएका थिए । त्यसै क्रममा बुधबार चिकित्सकहरुले एक घन्टा काम छाडेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघले डा केसीका माग तत्काल सम्बोधन नभए इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा बन्द गराउन आफूहरु बाध्य हुने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ । संघले डा केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाव दिन हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । चिकित्सकहरु यसरी आन्दोलनमा उत्रिंदा सरकारी अस्पतालको सेवा बढी प्रभावित भएको छ । अझ रेजिडेन्ट चिकित्सकको भरमा चलिरहेको काठमाडौका ठूला अस्पतालको सेवा अझ प्रभावित हुने देखिएको छ ।
डा. केसीको अनसन लम्बिंदै जाँदा मेडिकल अफिसरको दरबन्दी करीब करीब रिक्त रहेको कान्तिबाल अस्पतालमा रेजिडेन्ट चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिने हो भने अस्पताल नै बन्द जस्तै हुने अस्पतालका निर्देशक डा गणेश राई बताउनुहुन्छ ।
डा केसीको समर्थनमा चिकित्सकहरुको आन्दोलनले सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित भएपनि निजी अस्पतालहरुको सेवा भने सुचारु नै भएको देखिन्छ ।
यस अघिको आन्दोलनमा पनि सरकारीमा उपचार नपाएका बिरामी उपचारका लागि निजी अस्पताल पुग्ने गरेका थिए । अस्पताल जस्तो संबेदनशील ठाउमा ओपिडी होस् वा अन्य जस्तोसुकै सेवा पनि प्रभावित हुनु स्वीकार्य हुदैन । डा केसीको अनसन लम्बिंदै जानु र दुइ पक्षको लडाईले जनताले पाएको सास्ती र निजीमा गएर महंगोमा उपचार गर्न बाध्य भएको पीडा सुन्ने कस्ले ?
काठमाडौं । खाडी मुलुकमा जाने नेपालीहरका लागि सरकारले फ्री भिषा फ्री टिकट भने पनि अहिलेसम्म